Street Dance Fashion! What can we wear? – Ariel's Style
By arielthi2020 08/10/2020 04/11/2020
1960s နောက်ပိုင်းတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော street dance သည်အမေရိကန်ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အခြေခံလူတန်းစားလူမဲများ၏ လူ့ပတ်၀န်းကျင်တွင် စတင်ထွန်းကားခဲ့သည်။ 1970s နောက်ပိုင်းတွင် Street Dance သည် MCing (Rapping), Graffiti, DJ တို့နှင့်အတူ Hip-hop Culture ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ Street dance တွင် Old school style နှင့် New school style ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိြပီး Old school style တွင် Breaking, Popping , Locking ဟူ၍ အမျိုးအစားများကွဲ၍ ၀တ်စုံစတိုင်များလဲ မတူညီကြပေ။ 70s Funky Culture ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုလည်း ဆိုနိုင်ပေသည်။ New school style တွင် Hip-hop Style နှင့် Urban Style ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပြီး 1980s မှ ယနေ့တိုင် ခေတ်စားနေသော street dance ဖက်ရှင်များဖြစ်သည်။
Old School Style – Looking Dance
1970s တွင်ပထမဆုံး Locking Dancer အဖြစ် Don Campbell ကထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ Locking Dancer များ၏၀တ်စားဆင်ယင်မှုမှာ gentleman suit or tuxedo , shirt , Ribbon tie and bow တို့ကို ဖိနပ်အမြင့်၊ ခြေ အိတ်အရှည်၊ဒူးအထိရှည်သောဘောင်းဘီတို(Turnip shorts) တို့နှင့် တွဲဖက်၀တ်ဆင်ကြသည်။ Huge apple boy hat နှင့်လက်အိတ်အဖြူတို့ကို ၀တ်ဆင်ပြီးလှုပ်ရှားမှု ကိုပိုမို ထင်ပေါ် စေရန် (Black and White contrast color) အဖြူနှင့်အမဲမတူညီသောအရောင်တို့ကို ၀တ်ဆင်ကြသည်။
Old School Style – Popping Dance
Popper များသည် (Formal wear) အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီတို့ကို၀တ်ဆင်လေ့ရှိကြပြီး ကန့်သတ် ထားသော ၀တ်စုံ မရှိပေ။ (cool guy)၏ခံစားမှုကိုပေးသည့် အ၀တ်အစားများကို၀တ်ဆင်လေ့ရှိကြသည်။
Old School Style – Breaking Dance
Breaking dancer များ ကို Bboy ဟုလည်း ခေါ် သည်။ လေထဲတွင်ကိုယ်နေကိုယ်ဟန်ကို လှည့်ပတ် ကစားပြီးအမြင်အာရုံကို ပိုမိုဆွဲဆောင်စေနိုင်သော အက တစ်မျိုးဖြစ်သည် ။ Bboy dancer များသည် တစ်မူထူး သော ၀တ်စုံများကို ၀တ်ဆင်တတ်ကြသည်။ Oversize sport wear သို့မဟုတ် ရောင်စုံ၀တ်စုံများ ။ နောက်ပြန် ဝတ် ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်သို့မဟုတ် တံငါသည် ဦး ထုပ်။ ကြီးမားသောရွှေကွင်းဆက်နှင့်ရွှေလက်ပတ်နာရီ။အဝတ်တွင်လိုဂို၊သဘောထားဆောင်ပုဒ်၊ပုံနှိပ်ထားသောပုံစံများ စသည်တို့သည်အရောင်များကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော် ပြပေးနေပြီးအမြင်အာရုံကိုဆွဲဆောင်စေသည်။ခေါင်းနှင့် ကြမ်းပြင် ထိတွေ့သောလှုပ်ရှားမှုအချို့ပြုလုပ်ရန် လည်း လိုအပ်သော ကြောင့်အစရှိသော ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ် မှ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော wrist guards, hats or turbans အစရှိသော ဖက်ရှင်တန်ဆာများကို ၀တ်ဆင် လေ့ရှိကြသည်။
New School Style – Hip Hop Dance
Hip-hop dance သည် 1980s နှစ် အနှောင်းပိုင်း နှင1990s နှစ်များ အစော ပိုင်း ကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အကသမားများ က သူတို့နှစ်သက်သလိုဖျော်ဖြေကြပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသောလမ်းပေါ်ကအကများဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
Hip-hop dancer များကိုအကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်သော ‘dancer’များဟုခေါ်လေ့ရှိကြသည်။ Oversize အရွယ်အစား၀တ်စုံများက Hip-hop Dance ၏လွတ်လပ်သောစရိုက်နှင့်သဘောထားများကို ပေါ်လွင် နေ စေသည်။ အမျိုးသမီး အကသမားများသည် crop top နှင့် loose pants, Retro jackets နှင့် colorful sneakersတို့ကို၀တ်ဆင်တတ်ကြပြီး sexy and cool girl အသွင်ကိုဖြစ်စေသည်။ Hip-hop style ၏ရသကိုပိုမိုပေါ်လွင်စေရန် နေကာမျက်မှန်၊ ဘေ့စ်ဘောဦး ထုပ်၊ပန်းပွင့်ပဝါ၊ ကပ္ပလီများ၏ခေါင်းတွင်စည်းလေ့ရှိတတ်သောကြတ်ဆံမြှီးများအတိုင်းရစ်ပတ်ချည်နှောင်ခြင်းဖြင့်တန်ဆာဆင်တတ်ကြသည်။
ရွှေ/ငွေ/ကြေးတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကွင်းဆက် chain ကြိုးကဲ့သို့ သတ္တုဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်လည်း Hip-hop style အတွက်မရှိမဖြစ်သော ဖက်ရှင် accessories အဆင်တန်ဆာ များပင်ဖြစ်သည်။
New School Style – Urban Dance
Urban Dance သည်အကသက်သက်မဟုတ်ဘဲ Hip-hopကကွက်ကိုမြို့ပြအတွေးဖြင့်သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ Dancer တစ်ဉီးချင်း၏ Personal Style ကိုအသားပေးသောသရုပ်ဖော်အနုပညာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ Urban Dancer များ ၏ဖက်ရှင်စတိုင်သည် ပုံမှန်မရှိဘဲ သရုပ်ဖော်သည့်အတွေးကိုလိုက်၍ ၀တ်ဆင်‌‌လေ့ရှိကြသည်။
ယနေ့ခေတ် Street Dancer အများစုသည် Urban Style ကို Hip-hop elements နှင့် ပေါင်းစပ်၍ Top clothing outfit တွင် Hoodies နှင့် sweatshirt , T- shirt များကို၀တ်ဆင်လာကြပြီး ယနေ့ခေတ်လူငယ်ဖက်ရှင် လောကတွင် ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်လာခဲ့သည် ။1970s Hip-hop ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းတွင် Hoodies ၀တ်စုံသည်Graffiti Artists များ၏ဖက်ရှင်တစ်မျိုးဟု ဆိုရ ပေမည်။ ထိုစဉ်က Hip-hop ယဉ်ကျေးမှုကို လူတိုင်းလက်ခံသည့်ခေတ်မဟုတ်သည့်အတွက် Graffiti Artists များသည် Hoodies ၀တ်စုံ၏သဏ္ဌန်အောက်တွင်ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနှင့်အပြစ်ကျုးလွန်သူများပမာနေထိုင်လာခဲ့ရသည်။ Hip-hop ယဉ်ကျေးမှုကို ပိုမိုလက်ခံလာသည်နှင့်အမျှHip-hopယဉ်ကျေးမှု၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်Hoodies ၀တ်စုံကို ယနေ့ခေတ်လူငယ်များနေ့စဉ်၀တ်၀တ်စုံအဖြစ် သာမက High street Fashion များတွင်oversize and fit အသွင်နှစ်မျိုးဖြင့်ပါ၀င်လာခဲ့သည်။
Street Dancer အများစုသည် Hoodies နှင့် sweatshirt , T-shirt များကို baggy trousers,Joggers, sweatpants,spandex ,yoga pant,legging,skin-tight jeans,short pant တို့နှင့်တွဲဖက် ၀တ်ဆင်ကြသည်။Street Dancer များအတွက်သင့်လျှော်သောဖိနပ်သည်လည်း အရေးကြီး သော ကန္တတွင်ပါ ၀င်သည်။ အောက်ခြေတွင်လျှောစီးရန်လွယ်ကူသော Specialist hip-hop shoes , tennis shoes များကို၀တ် ဆင်ကြသည်။Hip-hop elements များဖြစ်သော chain ကြိုးများ၊ နာရီအကြီးစားများ၊ ကလစ်များ၊ sweatbandsခေါင်းစီးများ၊ Legwarmers နှင့် ဉီးထုတ် ၊ ပု၀ါစသည့် Accessories ဖက်ရှင်တန်ဆာများနှင့် တွဲဖက်၍၀တ်ဆင်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့်Hip-hop street dance style သည် ယနေ့ခေတ် လူငယ်များ၏ ဖက်ရှင်စတိုင်ဟုလည်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ဒီTV program လေးမှာတော့ Street Dance Fashion Menswear Fashion Outfitsတွေကို လေ့လာ တွေ့ရှိရသည့်အပြင် Street Style Trending brands များကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါသည်။
CategoriesBlog Styling TipsTagsNewSchoolStreetDanceStreetFashionStreetWearThi&FashionAllianceThiStyle
Previous10 Netflix Series to Boost Your Creativity During New Normal…..
NextHow to startacapsule wardrobe:aguide for beginners!